စားစရာ၊သောက်စရာ ဆောင်းပါးအရေအတွက်| WeXpats Guide
Hon Mirin ဆိုတာ ဘာလဲ၊ Hon Mirin ၏ ဗဟုသုတ (What is Hon Mirin? Hon Mirin's basic knowledge.)
ဂျပန်အစားအစာတေွကိုချက်တဲ့အခါမှာသုံးလေ့ရှိတဲ့ဟင်းခပ်အရည်တစ်မျိုးရှိပါတယ်။ အဲဒါကတော့Hon Mirinလို့ခေါ်တဲ့ ဟင်းခတ်အရက်တစ်မျိုးပါ။ Hon mirin ဟာအရက် တစ်မျိုးဖြစ်သော်လည်း ဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင်အဖြစ်သာ အသ...
နှစ်သစ်ကူးဟင်းလျာများ၏ မူလအစ အဓိပ္ပါယ်（Meaning and origin of New Year dishes）
"Osechi" သည် ဂျပန်တွင် နှစ်သစ်ကူး ဟင်းလျာအဖြစ် အချိန်အတော်ကြာ စားလာခဲ့ကြသည်။ ဂျပန်နှစ်သစ်ကူး ဟင်းလျာများ၏စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသည့် သမိုင်းကြောင်းကို သင်သိပါသလား။ မိသားစု၏ကျန်းမာခြင်း၊ သားစဉ်မြ...
ယဥ်ကျေးမှု စားစရာ၊သောက်စရာ ဆောင်းရာသီ
ဂျပန်စွပ်ပြုတ် Oden ၏သမိုင်းကြောင်းနှင့် ပါဝင်ပစ္စည်းများ( History and ingredients of Japanese simmered dishes Oden )
ဆောင်းဦးရာသီက အအေးပိုလာတဲ့အခါ စွပ်ပြုတ်ပူပူလိုမျိုးကို စားချင်နေကြလိမ့်မယ်။ ပျော့ပျောင်းသော ဟန်ပန်နှင့်ဂျပန်အိုဒန်း၏အရသာသည်စံဖြစ်သည်။ အိုဒန်းတွင်ပါဝင်သော ပစ္စည်းများမှာအသွင်အပြင်ကွဲပြားသော်လည်း ပါဝင်ပ...
ယဥ်ကျေးမှု စားစရာ၊သောက်စရာ ဆောင်းဦးရာသီ
ထင်းရှူးဝတ်မှုန်အလာဂျီ About Sugi (Cryptomeria japonica )Hay Fever
ဂျပန်၌နွေဦးရာသီသို့ရောက်လျှင် အဖြစ်အများဆုံးမှာ ပန်းဝတ်မှုန်အလာဂျီပဲဖြစ်ပါတယ်။ ပန်းဝတ်မှုန်အမျိုးမျိုးရှိရာတွင် ဂျပန်၌‌ေရာဂါလက္ခဏာအဆိုးရွားဆုံးမှာ ထင်ရှူးပင်၏ပန်းဝတ်မှုန်များပင်ဖြစ်သည်။ ဂျပန်...
စတော်ဘယ်ရီမျိုးကွဲများနှင့်ဂျပန်၌စတော်ဘယ်ရီသွားစားရန်နေရာများ Strawberry varieties and recommended places for strawberry picking in Japan
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင် လူကြီးများသာမကလေးများလဲစတော်ဘယ်ရီကိုနှစ်သက်စားသုံးကြသည်။ သို့သော်ဂျပန်နိုင်ငံသည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်စတော်ဘယ်ရီသီကိုဒီအတိုင်းစားသုံးမှုအများဆုံးနိုင်ငံဖြစ်သည်ဟုဆိုကြသည်။မှတ်ပုံတင်ထားသော ဂ...
အခြား စားစရာ၊သောက်စရာ နွေဦးရာသီ
ခရီးသွား စားစရာ၊သောက်စရာ ဖက်ရှင်
ခရီးသွား စားစရာ၊သောက်စရာ သမိုင်း ၊ ဘာသာရေး ရိုးရာ၊လက်မှုပညာ
ဂျပန်ထမင်းဗူးယဥ်ကျေးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဗဟုသုတ(Japanese bento culture)